Glass Beads for Polishing Polishing Grinding Media China Manufacturer
Description:Kitapo vita amin'ny vera,Kitaposima Glass pour politique Media,Vola vita amin'ny glasy ho an'ny famelomana ny Media
Home > Products > Fanosoram-biriky > Glass Beads for Polishing Polishing Grinding Media
Ny fampiasana fitaovam-pandrika vita amin'ny glas dia ampiasaina indrindra ho an'ny mpanaparitaka, ny fampiroboroboana ny haino aman-jery indostrialy, toy ny fananganana, ny loko, ny loko, ny poti-javatra, ny hodi-kazo, ny teknika simika, ny tombontsoa azo avy amin'ny tavy mangatsiaka, na ny haben'ny heriny, Noho ny toetra mampiavaka ny hafanana matevina, ny fatotra, ny fampihenana ny tavy dia azo ampiasaina mba hanatsarana ny plastika, ny fingotra ary ny toy izany.
Fampiharana vakana vita amin'ny glasy
Kitaposima Glass pour politique Media
1. Mikaroka ny mari-pamantarana mipetaka an-dàlambe
Rehefa mitondra fiarakodia amin'ny alina, dia manjelanjelatra ny haavon'ny tavoahangy mikrosom-bary. Ny microsphere glasa dia afaka mamolavola ny hazavan'ny fiara manjelatra ary mampiavaka ny mpamily ny tari-dalana mba hanatsarana ny fiarovana ny fiara. Ho an'ny microsphere glasy amin'ny dingana samihafa, rehefa fenoina ny tontolon'ny lehibe lehibe, dia azo ampiasaina tsy tapaka ny sombin-tsavony ambany.
2. Fanadiovana metaly sy polisy
Ny mikrôflôla glasa vita amin'ny glasy vita amin'ny sira dia manana fiantohana ara-tsimika tsara, hery ary fahatanjahana. Noho izany, dia ambony kokoa noho ny fampiasana fitaovam-pako ny fitaovana enti-manify noho ny ampiasana azy ho fitaovana fametahana hafa.
3. Fitifiran'ny pneumatic miaramila
Ampiasaina amin'ny fanadiovana ny angadrano, ny lamosina ary ny fametahana ny fiaramanidina fiaramanidina.
4. Io dia ampiasaina amin'ny famolavolana fofona deluxe, filler sy fanamafisana.
Mampiasaina amin'ny indostria orinasa. Io dia ampiasaina ho toy ny famenoana sy fampiroboroboana microsphere glasy amin'ny famokarana.
Amin'ny ankapobeny dia ampiasaina betsaka ny mikrosom-basy, miaraka amin'ny fampiasana mahery vaika. Hisy sehatra teknolojia vaovao hivoatra tsy tapaka.
Product Categories : Fanosoram-biriky
Hira fisaorana lehibe Contact Now
Glass Beads for Polishing Polishing Grinding Media Contact Now
Bozaka miorina tsara ho an'ny fiarovana amin'ny famokarana Contact Now
Fanosoram-biriky fanantazana (fametahana mediam-pamokarana) Contact Now
Fiasa haingam-pitaovana haingam-pitaovana lehibe Contact Now
Fepetra ankapobeny amin'ny paompy fanodinana menamena Contact Now
Fanodinana Microsphère Glass ho an'ny famokarana Mill Contact Now
Fiarovam-bovoka matevina Contact Now
Kitapo vita amin'ny vera Kitaposima Glass pour politique Media Vola vita amin'ny glasy ho an'ny famelomana ny Media Kitapo fanosotra vita amin'ny vera Porofo vita amin'ny vera Kitapo mivalona vita amin'ny labiera Kitapo fisaka amin'ny polisy Kilalao vita amin'ny glossy avo lenta